Miss Madagascar 2019: nasatroka an’i Binguira Valérie ny diadema | NewsMada
Miss Madagascar 2019: nasatroka an’i Binguira Valérie ny diadema
Buinguira Valérie, tovovavy voafidy ho tsara tarehy indrindra tany amin’ny faritra Analanjirofo. Izy no nambabo ny fon’ny mpitsara tamin’ny fifaninanana Miss Madagascar 2019, notanterahina ny asabotsy teo teny amin’ny Centre de conférences internationales (CCI) Ivato. Araka izany, ity Miss Analanjirofo ity no nosatrohina ny diadema ka hitondra izany mandritra ny herintaona.
I Buinguira Valérie no mandimby an’i Miantsa Valisoa, Miss Madagascar 2018 ka haneho ny hatsarana sy ny hakanto ary koa ny fahendrena malagasy amin’ny toerana sy ny sehatra halehany, mandritra ny herintaona. Ny Miss Boeny kosa no voafidy ho “1ère Dauphine” raha ny avy eto Analamanga no “2ème Dauphine”.
Izy telo mirahavavy, samy mahafeno ny fepetran’ny atao hoe kanto, na amin’ny endrika na amin’ny bika. Tsiahivina fa nisy karazany efatra ny akanjo nentin’ny mpifaninana nilatro, nandritra ny fifaninanana: ny fitafy nentim-paharazana, ny fitondra eny amoron-dranomasina, ny akanjo fitondra mianjaika ary ny fitafy an-tanàn-dehibe.
Ankoatra izany, misy koa ny fepetra eo amin’ny fahaizana amam-pahalalana ary ny fisokafan-tsaina, hitondra ny anjara biriky amin’ny fampandrosoana ny mpiara-belona. Miisa 15 ny tovovavy nifaninana tamin’ity Miss Madagascar 2019 ity. Avy amin’ny faritra 10 miampy ny “Miss diaspora”, voafidy tany Frantsa, izy ireo.